27 Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana munhu akaita mhiko+ chaiyo kuti ape Jehovha mweya maererano nokukosha kwakatarwa, 3 kukosha kwacho kwakatarwa kunofanira kuva munhurume anobvira pamakore makumi maviri kusvikira kumakore makumi matanhatu, kukosha kwacho kwakatarwa kunofanira kubva kwaita mashekeri makumi mashanu esirivha kana tichienzanisa neshekeri renzvimbo tsvene. 4 Asi kana ari munhukadzi, kukosha kwacho kwakatarwa ngakubve kwaita mashekeri makumi matatu. 5 Kana zera racho richibvira pamakore mashanu kusvikira kumakore makumi maviri, kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhurume ngakubve kwaita mashekeri makumi maviri uye kwomunhukadzi mashekeri gumi. 6 Kana zera racho richibvira pamwedzi mumwe chete kusvikira kumakore mashanu, kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhurume ngakubve kwaita mashekeri mashanu+ esirivha uye kukosha kwacho kwakatarwa kwomunhukadzi ngakuite mashekeri matatu esirivha. 7 “‘Zvino kana zera racho richibvira pamakore makumi matanhatu zvichikwira, kana ari munhurume, kukosha kwacho kwakatarwa ngakubve kwaita mashekeri gumi nemashanu uye kwomunhukadzi mashekeri gumi. 8 Asi kana ari murombo zvakanyanya zvokuti haakwanisi kuwana kukosha kwacho kwakatarwa,+ ngaabve amisa munhu wacho pamberi pomupristi, mupristi amutarire kukosha kwacho.+ Mupristi achamutarira kukosha kwacho maererano nezvinokwaniswa nomunhu wacho akapika.+ 9 “‘Kana iri mhuka seiya inouya nomunhu achiipa Jehovha, zvose zvaangapa Jehovha zvichava zvitsvene.+ 10 Haangaitsivi, uye haangaitsinhanisi, yakanaka neyakaipa kana kuti yakaipa neyakanaka. Asi kana akazotongoitsinhanisa, mhuka neimwe mhuka, iyo pamwe chete neyainotsinhaniswa nayo dzichabva dzava tsvene. 11 Kana iri isina kuchena+ isingaiti kupa Jehovha,+ iye ngaabve amisa mhuka yacho pamberi pomupristi.+ 12 Mupristi ngaaitarire kukosha kwayo, ingave yakanaka kana kuti yakaipa. Zvinofanira kuva maererano nokukosha kwakatarwa+ nomupristi. 13 Asi kana achida kuidzikinura, ngaabve apa chikamu chayo chimwe chete pazvikamu zvishanu+ kuwedzera pakukosha kwakatarwa. 14 “‘Zvino kana munhu akatsaura imba yake kuti ive chinhu chitsvene kuna Jehovha, mupristi ngaabve atara kukosha kwayo, ingave yakanaka kana kuti yakaipa.+ Mutengo wayo unofanira kuva maererano nokukosha kwainotarirwa nomupristi. 15 Asi kana munhu wacho akaitsaura achida kudzikinura imba yake, anofanira kupa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu zvemari yokukosha kwakatarwa kuwedzera pakuri;+ uye iyo ichava yake. 16 “‘Kana munhu achizotsaura chikamu chomunda wake+ kuti ape Jehovha, kukosha kwacho kunofanira kutarwa zvichienzaniswa nembeu yacho: kana iri homeri+ yembeu yebhari, chinobva chaita mashekeri makumi mashanu esirivha. 17 Kana akatsaura munda wake kubvira pagore reJubheri,+ ngauite mutengo unoenzanirana nokukosha kwakatarwa. 18 Asi kana akatsaura munda wake pashure peJubheri, mupristi ngaabve amutemera mutengo wakaenzanirana nemakore asara kusvikira pagore rinotevera reJubheri, uye vanofanira kutapudza pakukosha kwacho kwakatarwa.+ 19 Asi kana munhu wacho akautsaura achizodzikinura munda wacho, ngaabve apa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu zvemari yokukosha kwakatarwa kuwedzera pane iyoyo, uye iwo ucharamba uri wake.+ 20 Zvino kana akasadzikinura munda wacho asi munda wacho ukatengeserwa mumwe munhu, haungazodzikinurwizve. 21 Kana munda ukasunungurwa mugore reJubheri, unofanira kuva chinhu chitsvene kuna Jehovha, somunda wakatsaurwa zvachose.+ Ichava nhaka yomupristi.+ 22 “‘Kana akatsaura munda waakatenga usiri chikamu chomunda wenhaka yake kuti ape Jehovha,+ 23 mupristi ngaabve amutarira chitsama chokukosha kwacho kusvikira pagore reJubheri, uye ngaape kukosha kwacho kwakatarwa pazuva iroro.+ Iwo chinhu chitsvene kuna Jehovha.+ 24 Mugore reJubheri munda wacho uchadzokera kune waakautenga kwaari, kumuridzi womunda wacho.+ 25 “‘Zvino kukosha kwose ngakutarwe kuchienzaniswa neshekeri renzvimbo tsvene. Shekeri racho ngariite magera makumi maviri.+ 26 “‘Asi pamhuka, inotanga kuberekwa, inotanga kuberekwa nokuda kwaJehovha,+ ngaparege kuva nomunhu anoitsaura. Ingava nzombe kana kuti gwai, ndeyaJehovha.+ 27 Kana iri imwe yemhuka dzisina kuchena+ uye iye achida kuidzikinura maererano nokukosha kwakatarwa, ngaabve apa chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu achiwedzera pakukosha kwacho.+ Asi kana isingafaniri kudzikinurwa, ngaibve yatengeswa maererano nokukosha kwakatarwa. 28 “‘Kungoti pazvinhu zvake zvose, hapana chero chinhu chipi zvacho chakatsaurwa icho munhu angatsaura kuti ape Jehovha kuti chiparadzwe,+ chingava chichibva pavanhu kana pamhuka kana pamunda wenhaka yake, chingatengeswa, uye hapana chero chinhu chipi zvacho chakatsaurwa chingadzikinurwa.+ Icho chinhu chitsvenetsvene kuna Jehovha. 29 Hakuna munhu akatsaurwa, uyo angatsaurwa kubva pavanhu kuti aparadzwe angadzikinurwa.+ Chokwadi anofanira kuurayiwa.+ 30 “‘Zvegumi zvose+ zvenyika, zvembeu yenyika nezvemichero yemiti, ndezvaJehovha. Icho chinhu chitsvene kuna Jehovha. 31 Kana munhu achida kuzodzikinura chegumi chake, ngaawedzere kwachiri chikamu chimwe chete pazvikamu zvishanu.+ 32 Kana zviri zvegumi zvose zvemombe nemakwai, zvose zvinopfuura nepasi pomudonzvo,+ chegumi chacho chichava chitsvene kuna Jehovha. 33 Ngaarege kuongorora kuti chakanaka here kana kuti chakaipa, uyewo ngaarege kuchitsinhanisa nechimwe. Asi kana akangochitsinhanisa, icho pamwe chete nechachakatsinhaniswa nacho zvichava zvitsvene.+ Hazvingadzikinurwi.’” 34 Iyi ndiyo mirayiro+ yakapiwa Mosesi naJehovha kuti ive mirayiro kuvanakomana vaIsraeri muGomo reSinai.+